Jenesis 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
10 Nke a bụ akụkọ banyere ụmụ Noa,+ bụ́ Shem, Ham na Jefet. A malitere ịmụrụ ha ụmụ mgbe iju mmiri ahụ gasịrị.+ 2 Ụmụ Jefet bụ Goma+ na Megọg+ na Medaị+ na Jevan+ na Tubal+ na Mishek+ na Taịras.+ 3 Ụmụ Goma bụ Ashkenaz+ na Raịfat+ na Togama.+ 4 Ụmụ Jevan bụ Elaịsha+ na Tashish,+ Kitim+ na Dodenim.+ 5 Ọ bụ site ná ndị a ka ndị bi n’agwaetiti nke mba dị iche iche si gbasaa n’ala ha, nke ọ bụla dị ka asụsụ ya si dị, n’ezinụlọ n’ezinụlọ, ná mba ná mba. 6 Ụmụ Ham bụ Kush+ na Mizrem+ na Pọt+ na Kenan.+ 7 Ụmụ Kush bụ Siba+ na Havila na Sabta na Reama+ na Sabteka. Ụmụ Reama abụrụ Shiba na Didan.+ 8 Kush wee mụọ Nimrọd.+ Ọ bụ ya bụ onye mbụ ghọrọ dike n’ụwa. 9 Ọ bụ dinta dị ike nke na-emegide Jehova. Ọ bụ ya mere e ji ekwu, sị: “Dị nnọọ ka Nimrọd bụ́ dinta dị ike nke na-emegide Jehova.”+ 10 Alaeze ya malitere na Bebel+ na Irek+ na Akad na Kalne, ndị dị n’ala Shaịna.+ 11 O si n’ala ahụ banye n’Asiria+ wee malite iwu Ninive+ na Rehobọt-Iye na Kela 12 na Risen nke dị n’agbata Ninive na Kela: ọ bụ nke a bụ obodo ukwu ahụ. 13 Mizrem+ wee mụọ Ludim+ na Anamim na Lehebim na Naftuhim+ 14 na Patrusim+ na Kasluhim+ (onye ọ bụ n’agbụrụ ya ka ndị Filistia+ si pụta) nakwa Kaftorim.+ 15 Kenan wee mụọ Saịdọn+ bụ́ ọkpara ya, mụọkwa Het+ 16 na ndị Jibọs+ na ndị Amọraịt+ na ndị Gegash 17 na ndị Haịvaịt+ na ndị Akaịt na ndị Saịnaịt 18 na ndị Avad+ na ndị Zemaraịt na ndị Hemat;+ e mesịa, ezinụlọ dị iche iche nke ndị Kenan gbasasịrị. 19 Ókè nke ala ndị Kenan wee malite na Saịdọn ruo Gira,+ nke dị nso na Geza,+ ruo Sọdọm na Gọmọra+ na Adma+ na Zeboyim,+ nke dị nso na Lesha. 20 Ndị a bụ ụmụ Ham n’ezinụlọ n’ezinụlọ, dị ka asụsụ ha si dị, n’ala ha dị iche iche, ná mba ná mba. 21 A mụkwaara Shem, nwanne Jefet bụ́ ọkpara, ụmụ, ọ bụ ya bụ nna nna nke ụmụ Iba+ niile. 22 Ụmụ Shem bụ Ilam+ na Ashọ+ na Apakshad+ na Lọd na Eram. 23 Ụmụ Eram bụ Ọz na Họl na Gita na Mash.+ 24 Apakshad wee mụọ Shila,+ Shila wee mụọ Iba. 25 A mụụrụ Iba ụmụ abụọ. Aha otu bụ Pileg,+ n’ihi na ọ bụ n’ụbọchị ya ka e kewara ụwa;+ aha nwanne ya bụ Jọktan.+ 26 Jọktan wee mụọ Almodad na Shilef na Hezamevet na Jira+ 27 na Hedoram na Yuzal na Dikla+ 28 na Obal na Abimael na Shiba+ 29 na Ofa+ na Havila+ na Jobab;+ ndị a niile bụ ụmụ Jọktan. 30 Ebe obibi ha malitere na Misha ruo Sifa, bụ́ ógbè Ebe Ọwụwa Anyanwụ bụ́ ugwu ugwu. 31 Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Shem n’ezinụlọ n’ezinụlọ, dị ka asụsụ ha si dị, n’ala ha dị iche iche, ná mba ná mba.+ 32 Ọ bụ ndị a bụ ezinụlọ dị iche iche nke ụmụ Noa dị ka agbụrụ ezinụlọ ha si dị, ná mba ná mba, ọ bụkwa site na ha ka mba dị iche iche gbasara n’ụwa mgbe iju mmiri ahụ gasịrị.+